The World Nepal News | गाउँ गाउँमा कोराना भाईरस बारे सचेतना फैलाउदै नेपाल प्रहरी
गाउँ गाउँमा कोराना भाईरस बारे सचेतना फैलाउदै नेपाल प्रहरी
संवाददाता | २०७८ बैशाख १६, बिहीबार
बाँके / बढ्दो कोभिड १९ का कारण शहर साथै ग्रामिण क्षेत्रमा जनजीवन फेरि नराम्रो संग प्रभावित बनेको छ । पछिल्लो समय बाँके जिल्लामा पनि ब्यापक कोभिड- १९ बढ्दै गएपछि नागरिक सचेत हुन र नागरिक लाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न अनिवार्य माक्स लगाउन सरकारले अनुरोध गरेको छ । सरकारले यति आग्रह गर्दा पनि नागरिकहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा नगरि माक्स सम्म नलगाई हिड्न थाले पछि बेतहनी प्रहरी चौकीले तपाईको माक्स खै ? अभियान सुरुवात गरेको छ साथै माईकिङ्ग गरि कोभिड बारे जन चेतना फैलाउने कार्य गरेको छ ।
बेतहनी प्रहरी चौकीले डुडुवा गाउँपालिकाको वडा नं. २ को बेतहनी, सन्तालिया, बाबा गाउँ, र्पूवबाडी, जाफरपुरवा, कोलई र नौरी गौरी गाउँमा माईकिङ्ग गरेको छ । अभियानको सुरुवात बेतहनी बजारबाट सुरु गरिएको थियो । माईकिङ्ग गर्नु भन्दा १ दिन अघि बेतहनीमा २०० जनालाई माक्स बितरण गरिसकेको बेतहनी प्रहरी चौकीका ईन्चार्ज कुल बहादुर विकले जानकारी गराउनुभयो । साथै उहाँले अब ब्यापक जनचेतना फैलाउन गाउँ गाउँमा गएर कोभिड सम्बन्धि सचेतना फैलाउन लागिएको बताउनुभयो ।
यस अघि पनि विकले समाजमा विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रम सन्चालन गर्दै आउनु भएको छ । बिक जहाँ सरुवा भएर जानु हुन्छ त्यहाँ केही नयाँ कार्य गर्न रुचाउन बताउनुहुन्छ । स्थानीय नागरिकक मन जित्न उहाँ सफल हुुनुहुन्छ । साथै उहाँले अति विपन्न विद्यार्थीहरुको लागि ब्यक्तिगत तवरले किताब कापी र ड्रेस वितरण गर्दै आउुनु भएको छ । उहाँ एक नेपाल प्रहरी भए पनि अहिले बाँके र बर्दिया जिल्लामा सामाजिक अभियान्ताको पहिचान बनाउन सफल हुनु भएको छ ।
२०७८ बैशाख १६, बिहीबार प्रकाशित